DEG DEG: Taliyihii Ciidamadda Xoogga iyo Wasiirkii Gaashaandhiga Soomaliya oo is casiley iyo waxa dhacay (Waraysi) | Kalshaale
DEG DEG: Taliyihii Ciidamadda Xoogga iyo Wasiirkii Gaashaandhiga Soomaliya oo is casiley iyo waxa dhacay (Waraysi)
Oct 12, 2017 - 166 Aragtiyood
Muqdisho (Kalshaale) Wasiirka Gaashaandhigga Xukuumadda Soomaaliya C.rashiid C/llaahi Maxamed ayaa goor dhow iska casilay xilkiisa, isagoo Warqada istiqaaladiisa u gudbiyay golaha wasiirada, kullankoodii toddobaadlaha ee ay maanta Muqdisho ku yeesheen.
Wasiirka Warfaafinta Soomaaliya Eng: Cabdiraxman Cumar Cusmaan Yariisow ayaa sheegay in Wasiirka uu isu casilay arrimo shaqsiyadeed.
Dhanka kale, wax yar ka hor iscasilaadda Wasiirka, waxaa wasaaradiisu ay u gudbisay golaha wasiirada iscasilaadda Taliyihii ciidamada xoogga dalka Soomaaliya, Axmed Jimcaale Geedi (Cirfiid) oo isna sheegay inuu iscaslay.
HALKAN KA DAAWO WASIIRKA OO KA WARBIXIYEY
Is casilaada Wasiirka Gaashaandhigga ayaa ka dambeysay wax yar un kaddib markii uu is casilay Taliyaha Ciidamada xoogga dalka Jen. Jimcaale Cirfiid, iyadoo xilka Taliyaha loo magacaabay Cabdiweli Jaamac Xuseen Gorod, Waxaana sida wax u dhaceen ka warbixiyey Wasiir Yariisow.
Akhyaarta ra'yigiina halkan ku qora (166)
maxay isu casili waayeeen 3 bilood ciidamadu mushahar ma qaadanin dhaqaalihina waa lagu tumanaya xita dhaqale xoog leh oo gudiga takaluyntu ururiyen jeebka kheyre ayay ku dhacdaa meel lageeyana lama oga.
waa tilaabo fiican oo aan sugeysnay maadaaba ay labadoodaba ku lug lahaayeen – Xasuuqii BARIIRE.
Wasiirka waa ninkii beenta cad sheegay markey wareysaneysay FALASTIIN AXMED IIMAAN. oo waliba ku celcelisey su’aalo adag oo muujinhayo sidey uga xumaatey shacabka la laayey.
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh waa wareey aar waa budh-budhay,,,,,wasiirkii gaashaan dhiga iyo janaraalkii ciidan ayaa baarashuudkii goostay,,labo wasiir oo kale ayaa iyaguna hadda is casishey,,
AAR ARMAAJO waa arkaayey inaanu meel gaadheyn,,daaroodkii baa u dhameeyey hawiye shaqo kuma laha ,AXMED MADOOBE IYO GAAS BAA U TASHADAY kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk aar waa budh budhay
Waa horumarka loo qaaday dhinaca dawladnimada
In masuulku is casilo lagana aqbalo istiqaaladiisa
Si uu meesha u baneeyo.
Guul madaxweyne Farmaajo iyo raysal wasaare xasan Cali Kheyre
Tani waa bilow tilmaamaya caqliga daanyeernimada ee ahaa in hogaanka dalka labadallo eey qalad aheeyd Feb 2017.
In meesha khibrad yari iyo qaab darro jiro, iyo been, waxaa cadeeyn u ah, qof marka labadayo, amaba uu mas’uul is casilayo, waa in sababta la sheegaa. Hebel baa is casilay amaba labadalay waa wax tilmaamaya jilicsanaanta hay’adaha dowladda.
Fikirkeeyga shaqsi ahaan, wasiirka gaashaandhiga markii horena qalad ayaa lagu magacaabay [oo waa qalad ninka hogaaminaya ciidanka, iyo ciidanka badidooda in eey kala qabiil ahaadaan, dad iskugu yeera consultant, lataliyaal ayaase beentaan aan cadeeynta laheeyn ugu sheekeeyay dowladda dhexe, in fact, daraasaad u fiirsasho ah ayaa sheegeeysa marka taliyaha ciidanka iyo ciidanka la dhisayo eey isku reer yahiin, in eey ka waxqabad badanyahii, badal, marka wasiirka gaashaandhiga sida Carab Ciise laga dhigo, granted, in casharo ilaalinta xaquuqda bani’aadamka lasiiyo ciidanka, marka horena si taxadar ah loo qoro, oo laga qorra qabiiladda Somaliyeed oo dhan kuwooda diyaarka u ah in eey askar u noqdaan dowladda dhexe]
Yacni Hawiye unbaa noqon kara wasiirka iy taliyaha ciidamada qaranka maadaamoo ay u badanyihiin ciidan ku sheega Muqdisho jooga. Wuxu caqli xumaa.
Waryaa raxanwaynta ciidan qaran sheegata ee bako iyo Bay iyo shabeelada hoose jooga cidna kama badna haddii ciidan beeleed lagu noqonayo wasiir lkn waxaad ka boodsanatahay in wax ciidan qaran ahi jirin qabiilkastana tuulada uu joogo maleeshiyaadka jooga ayaa ciidan qaran u ah.
Badow baad tahay ee dadka kale dhexfadhiiso qabiilka iyo qurunka aad wado kulahaa ciidamadu waa hawiye ee maa labadaba hawiye laga dhigo.
War dadkan federalka diidan haddana ciidanka qarankana u yaqaana maleeshiyaadkooda wadankana u yaqaana muqdisho haddana labadaba way haystaan ee may wax ku qabsadaan?
Balxaasidiintan SNM eega Ciise Binu man iyo Bisada Hargaisa waxaad jeceshihiin in Somalia Baabado laakiin noqon mayso inshaa alaah
Markii SNM 8 da wasiir beenaad is casileen maxaad u oranwaydeen way burburtay SNM?
Waan ognahay markastoo Soomaalia hore u marto Hargaisa,Burco, iyo Berbera waa laga naxaa why?
Jawaabta iyakaan ka sugaynaa anaku Gobolada waqooyi ee Soomaalia markay shacabku horu u maraan waan ku faraxnaa
Wiil Ciideed, waad ka dhacsantahay. Badownimada iyo waxaad sheegeeysidna adiga ayeey ku heeystaaa.
Qabyaaladda iyo qurunka aad sheegeeysana adiga ayeey ku heeystaa. Caqli xumo tan ugu darran ee daanyeernimana adiga ayeey ku heeystaa.
Waxaana kuugu bishaareeyn in aad sidaas daanyeernimada u noolaan inta aad nooshahay, sida daanyeerka ilaa eey xanuunyo badan oo PTSD iyo kuwa kale kugu dhacayaan, sababtoo ah, waxcaad shaqo ka dhigatay daanyeernimo iyo qabyaalad, isla markaana dadka kale ayaad ku eedeeyn.
Amaba Raxanweeyn u heeys amaba cid kale, anniga waan kuu sheegi sida eey ila tahay, ciidanka hadeer lahayo iyo taliyaha waa in eey isku reer ahaadaan. Period, ma shaqeeyneeyso Xuseen Carab Ciise ayaa wasiirka gaashaandhiga ah iyada oo 20 nin oo akar ah oo Isaaq ah eeysan ciidanka kujirrin.
Adigus daanyer ayaad tahay oo ma fahmeeysid waxa aan ka hadlayo, amab kaba darrane, fulay ayaad tahay oo in ciidan dhismo ayaad ka baqi.
Oo yaa fucking u diidan qabiilka aad sheegato in eey ciidan noqdaan? Wacaa u diidan DNA, oo waxeey kajeclana lahaayeen ciidan qabiil in eey noqdaan, oh yes, waliba loogu biilo qasnada iyo lacagta dowlada dhexe iyaga oo aanan ka amarqaadan.
Daanyeer caqli xun.
Madaxwayanaha, Raysalwasaaraha iyo gudoonka golaha shacabkanu hal qabiil ha noqdaan haddii ay wado shaqayn keeni oo ay qabiilada kale yeeli!!
Waryaa caqli xumaantaada miyaadan ogayn wixii dhacay 1991 iyo in markii la isu imaanwaayay dad xaqii la duudsiyay oo 4,5 wax lagu qaybiyay ilaa maantana ay dowladu sidaas tahay.
Haddii cadaado oo tuulo ah taliayaha galmudug iyo wasiirka arimaha guduhu kale qabiil yihiin muxuu yahay xalka ku jira in soomaaliya oo dhan ay labo nin oo isku jifo ahi xukumaan ciidankeeda.
Meeshu ma North Korea iyo Sauadi Caribiyaa kuwaas ayuu qows maamulaaye?
War bal waxan aan kuu sheegi si degan u akhri oo garo waxa danta dalku ku jirto iyo wadanka dadka degan.
Dowlad oo Cadaado oo kale macal xaaqe ka yahay sharciga iyo nidaamka laga sugi muxuu yahay😎😎
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh mid JUXA layiraahdo oo ay wasiirka arimaha gudaha ku sheegeena hadduu is casiley ,AAR WAY BUDH BUDHAY,,yaa budh budhiyey hee,,daaroodlee maahoo,,hawiye denbi kuma laha kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Waagii Hiraabku ku dagaalami jireen Xamar waxaa hubka u kala gudbin jirey Xawaadle iyo Murusade WHY?
Because maraqooda ayaa ku jiro iney kala dalaalan Madarkicis iyo Mudullood,
hadda Danta Majeerten ka leeyahey Qalalaasaha JUBBOOYINKA waa iney isku diraan reer Jubbo, ka dibna gurbaankii Kablalax ku qaraabtaan.
Waxaan xasuustaa waqtigii Kismaayo crisis.
sidaa ogtihiin ilaa waqtigii Axmed Cadde isu dhiibey Villa Xamar, waxaa muuqatey inuu yaraan hayey maraqa Bari iga yimaado Kismaayo.
Su’aashu ma waxaa waaye
Axmed cadde Gamadoobe ayaa maqley iney baxahayaan Kuukuuyo
mise reer webi sonkoreeye siyaasadda iyo nabada ayey isku qaldeen.
Wiil Ciideed, waad ka dhacsantahay ee soo koorsay. Cadaada amaba tuulo kusheeg, amaba Puntland dalka puntland kusheeg, wax walba waxa eey yahiin weey ahaan, af wax laguma qaldi karro, lagumana marin habaabin karra.
Formaajo In aan lahayn Tol taageera ama garab siiya waa la ogaa – ileen Somalibaa nahay oo waa lays yaqanaaye.Hawiye iyo Somalida kale ayaa Tol u ahaa oo Tol Somaliyeed ayuu lahaa ama uleeyahay.
Dee Waadigaa arkaya in Yaydii Siyaad Bare hadhka ka saaray ee dadka ku diray u soo jeesteen inay hadhka ka saran.
Daaroodnimadu waxay shaqaysaa marka xumaan loo socdo ama hunguri loo socdo.Waa sidaa darted wax uu Foraamjo u waayay taageero Daarood.Isagu wanaag ayuu rabaa.
Maxaan kaga dhacsanahay bal ii sharax?
Dadku hadalka ayuu isku afgartaa ee bal qodob dastuur ama xeer qabiil waxa aad ku doodi midka ogal i tus? Cajab😎
Madaxwaynuhu waa in uu is casilaa si deg deg oo dalka doorasho loo qabtaa intaan chaos iyo anarchy horleh la sii galin. Or we should remove from office by force (AMISOM)
Ala maxaa meeshan qabyaalad cuqdad iyo qudhun kasocota ninki wax hagaajinaya
dalka iyo dadka u baahane hayskeeno miidaanka
nacaskaan wax qabankarini hala aamuso cuqdada
Uncle albert baa yaabay!
Waxaad kaga dhacsantahay ciidanka aad ku sheegi qabiil ee dowladda dhece, waa “voluntary” oo xildhibaanada iyo wasiirada qabiilada hadii eey keeni lahaayeen ciidamo qabiiladooda ah, dowladda dhexe, thank you, ayeey dhihi laheeyd. Marka, ciidanka aad caayayso ee dowladda dhexe waa qabiilada diyaarka u ah in eey u shaqeeyaan, amaba ugu yaraan ka’amar qaataan dowladda dhexe. yes, toos toosin, iyo rehab, dhaqan celin qaarkood waa u baahanyahiin.
Waxaad kaloo ka dhacsantahay, in aadan fahamsaneeyn “ethnical federalism” in uusan lamid aheeyn, dowladaha federalka ee dadka caqliga leh ee aduunka qaarkood isku xukumaan. Federalka qabiilka adiga iska dhaaf’e, xataa hogaamiyaha aad taageersantahay ee qabiilkaada, Abdiwali Gaas ma fahamsana. Model kaan, waxaa lagu tijaabiyay oo aan kasoo qaadanay Ethopia, waxuuna ugu shaqeeyay Ethopia ilaa iyo 1991 kii, waxeey aheeyd walow Federal qabiilo ah u dhaqmayeen waxaa si dhab ah, u wada xukumay, oo eey ka’amar qaadaneeyeen dowladda dhexe ee Addis Ababa. Maalintii dhaweeyd, ilaa iyo sanadkii lasoo dhaafay, ayaa la’arkay dildilaaca nidaamka Federlka qabiiliga ah kadib dagaalkii qabiilada Ethopia sida Somalida iyo Oromada iyo kuwa kale (joornaalada aduunka oo dhan ayaa wax ka qoray, fiiri hadii aad dooneeyso).
Marka, ninyahow, bottom line, ayaan waxaan kuu sheegi, bulsho kasta meel ayeey taagantahay xaga waxbarasho, wax fahan, aqoon, xadaarad, suugaan, farshaxan iyo waxyaabo kale oo aduunka inta lajooga muhiimm ah. Adiga iyo dad badan, oo isu heeysta in eey yahiin difaacayaasha nidaam Federal oo qabiili ah, taariiqda meel qaldan ayaad kataagantahiin. Waqti badan markaad iska qasaarisaan, Somalina kaqasaarisaan ayaad ogaan doonntaa, insha’allah.
Lama mid ah, dowlad dhexe oo xoogan oo Somaliya yeelato, in eey wax walba, u yeeriso goboladda dalka Somaliya.
Waxaan ka baqayaa adoo xitaa inaad marka aad salaada ku jirto hadaad sahwido oo ragcad ka tagto inaad tiraahdo Majeerteen baa ka dambeeyey alla cuqdad ku haysa fara waynaa.
Mawduuc kasta oo laga hadlayo waa kii meel un Mj kasoo galiya oo iska laaladiya.
Waxaad la mid tahay wiilkii bahalka aabihi ku dhagay oo odaygii yiri war aabe bahalka iiga fuq oo wiilkii isa sii dhagooleeyey oo udaygii inta hoos u dhugtey yiri wacada hadaadan bahalka siidey wax iga dhimayside hooyadaa un baad ku dheerayn.Haatan adoo laan gaab ah hadaad niman laandheeraa ay kaaga dhegtey inaad iska laa laadiso dee wax kama qaadaysid ….. inta kale ku darso
Hadaad wiil yar oo fasalka 2aad ah ku qasabto inuu ka shaqeeyo xisaabta Algebra soo dhibaato maahan – waryaa hadda ka shaqee
4(-2x – 1) – (x – 2) = -3(3x + 4) + 12
Dadkaan maxey ka fahmahayaan farqiga u dhaxeeyo tribe federalism iyo state federalism.
( Tankale Ethnic Federalism waa sida Itoobiya, Kenya, India, Bosnia ) means
Dad kala luuqad, kalar ama diin ah.
Somalia is not Ethnic, waa baho federalism – Bah weyn iyo Bah yar camal oo xoolaha iyo dheriga loo kala soocey.
Majirto farqi u dhaxeeyo xaasaska ay qabaan walaalahey oo qabiilo kala duwan ah ama caruurta aan abtiga u ahey oo ey kala dhaleen aabayaal qabiilo kala dego dhamaan gobolada dalka.
horta maxaad dabo iyo geedka raga ugu saleysaa sheeko kasto. war reer Bari bahalka ayaa dhib ku hayo malaha oo qoraxda ayaa ka fadhiisisey.
Miyaan horta kaaga sheekeeyey sheeko dhex martey wiil Daa’uud ah iyo Mid DASHIISHLE ah oo Sudaan wada joogey.
– Kii dashiishle waryaa aniga oo laandheere ah miyaad ila tirsan adigoo daa’uud ah. kkk
Laandheere hadad tahey tuulo ayaad camirilaheyd sida ISAAQ oo Biyomaal la siman.
Faanka qaar u reeba dumarka.
AWW HA ISDABA SAQLAYSOOOOOOOOOOOOOOOOOOOY
WAAL WAALATAYE XERADA GAL
Dowlad dhexe oo xoog badan maxaan uga baahanahay marba haddii nin aan awood lahayn oo Villa soomaaliya dhexfadhiya rabo in uu maamulo meel uusan tagi karin dadkeedana uusan ka warhayn maxay dowlad dhexe oo unitary ahi tarilahayd oon ka ahayn sidii kacaankii car juuqdheh.
Good governance, accountibilty and transparency ayaa loo baahanyahay ee looma baahna trynnical rule. Haddii aad maamulada ku tabeyso wax is dabo marin waxay ahayd in aad ku dadaasho sdii aad adeegooda garsoor iyo maamul u hagaajin lahayd ee ma ahayn dumintooda in aad ku hamido.
Midan ah federal dad kale duwan ayaa isticmaalo ma aha dood sax ah lkn soomaalidu waa dad qalbi owdan oo wixii nin u dhaho mar iskaga cel celiya. Tusaale soomaalida badankeed waxay aaminsantahay in xidigta calanka soomaaliya ay shanta soomaaliyeed matasho oo haddii fikirkaas laga laabto calanka la badalo iyaga oon u fiirsan in adduunka calamadiisa badankood xidigtaas leeyihiin.
Midka Jabuuti ayaa leh xidig cas, Ghana , Itooobiya iyo Afrika ayaa calan xiddig 5 gees ah leh mana u taago qaybaha wadamadaas. Marka soomaaliya wax u diidaya Federal ma jiro oo diin iyo dhaqan kuma xidhna haddii si cadaalad ah la isu maamuli wax walba oo lagu heshiiyo waa caadi. Marka federal diidka ayaa afka idiin galiyay arintaas idina sida cajal unbaad soo cel-celisaan.
Federalka waxa aan ugu dheganahay ayaa wuxuu yahay haddii dowlada dhexe dunto in aan lala dumin sidii 19991. Rajada fcn ee muuqatana waa wixii kismaayo ka dhacay in 5 maamul goboleed isu yimaadaan oo road map cusub jeexaan. Adiguna balaayo ayaad u aragtaa.
Adduunka waxaa ka dhacay power transition iyada oo China iyo Russia soo kaceen Then the uni-power ( US) dominated world become multi-power .
waxaa intaad sii dheer in uu dhacey power diffusion oo non-state actors awoodii gacanta u gashay taas oo sababtay in wadamada jilicsan dano kale laga dhex wato, ilaa inta laguu ogolyahay aad qaadata waxba kuu hagaagimaayaan. marka dowlada xoogan ee soomaaliya maanta laga sugi maxay tahay haddiiba aan lala wado tashan bilowgiiba.
haddaan waqti kuu helaye
Calanka buluugaa waxaa la aas aasey oo la geeyey qaramada midoobey 12 OCTOOBAR 1954.
26kii June 1960 waa maalintii Gobolada waqooyi qaateen Xornimada ee maahan maalintii la aas aasey ama la horgeeyey UN CALANKA BLUEGAA EE XIDIGTA CAD LEH.
Aqoon kororsi ceeb maahan, is xariifin cilmi maahan, faan run maahan.
Anigu ma garanaayo waxa aan ku falaayo midnimada ay diideen kuwa report-ka iigu keena jigjiga kkkkkkkk
waar un calan xor ah baa la geeyaa ,calanka somaliyana waxaa un laga taagey 26 juun 1960kii anagaad taariikh been ah noo sheegeysaa looooooooooooooooooooooooooooolz
Thanks sxb aniga laftigaygu waan la qabay su’aashaas Ciisee buni axmed.
Sxb midnimada Soomaliya ilaali hadii kale ethiopia ayaan kuu dhiibi sidii qalbi dhagax.
waar waa been ,waa wax siyaad barre u mal maluuqay ,calanka somaliland 1991kii baa la sameeyey ma yaalaa UNka hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
Ciise buni axmed. .
Waar dabshid ma cawslihii buu inoo muuseeyay?!
Palace Quamayaa Yaabtay
Hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
gah gah gah gah gah gah oo haddaa DABSHID wuu ku marsiinayaa hadduu cidla kaa helo kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Aarka hargaysa, ma ujeedaa meesha aan marsiinaayo kii indhaha guduudnaa (dabshid) kkkk 2 nin oo ilma adeer ah ayuu ukala naagaynayaa oo uu ku leeyahay farmaajo ayaa noo dhaama gaas kkkkkkkk heeryo in aan saaro umbaa udhiman kkkkkkkk
waar YAM YAM IYO QADAAD WEYNTII WALAWEYN yagiibaa AL-SHABAAB IYO AL-ITIXAADIYA isaga soo horeeyey oo is BUDH BUDHIYEY
QARDASH ,ORDAGON BAA QUUSTAY
Ahahaha, waar xariifnimadaas waan ku ogaa MR DABSHID ee waxaan moodaayay mid uu reer bariga ula tageee ma anigii buu I mooday reer sahare ku nool?!
Shaahii baan ku saxday😂😂
Waryaa waa kaagan indhaha guduudan (dabshid) War meeshan waxaa isku haya 2 nin oo ilma adeer ah farmaajo iyo gaas ee maatiyahay caanaha leh kadhex bax wiilashanada oo arag hadba kii aanu jeclaano ee aanu kuu keeno kkkkkkkkk
waar hawiye siyaasaddii way idinka badiyeen,,lafo geri yagaa la isku jebiyaa bay idin kaga dhigeen,,hawiye yagaa rabey inay farmaajo ridaan wallaahi ,balse aday ku adeegsadeen si aan hawiye berito loo ridin oo waxay odhanayaan dawladdii daarood ,,daarood uun baa ridey,,kursigana berito si xarago leh bay u fadhiisanayaan
MA ADAA FAHMEYBA ,,WAA SU’AAL DA’WEYNOO MADAXA DAALINAYSEE
salaad cali jeele iyo yalaxow oo feedha ka qoslaya ayay soo saareen durbaba kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Somalilander, ma ujeedaa meesha aan marsiinaayo kii indha guduudnaa kkkkk kuye: gaas ma doonayno ee farmaajo ayaanu rabnaa kkkkk kaliya waxaa u hadhay inaan qobtol saaro kkkkkkkkkkkk
maadaama soomaaliya ku jirtey isticmaar (gumeysi) waxaa lagu qasbey iney UN ka iibiyaan mashruucooda Xoriyadda doonka oo ay iska dhigaan qomiyad taqaano micnaha dowladnimada.
Presentationka ay ka hor aqriyeen/dhigeen UN ayuu ugu horeeyey iney keenaan ASTAANTA DALKOODA IYO DADKOODA.
Markuu Halgame C/llaahi CIISE Max’uud aqrinhayey qoraalka ka sheekeyn dalkiisa iyo dadkiis waxaa gadaashiisa surnaa calanka Bluegaa – si geesinimo ku jirto ayuu u sheegey inuu u doodahayo 5 shanta Soomaaliyeed (Calanka ama xidigtu tilmaameyso).
Ka dib waxaa la siiyey muddo lagu kala wareejiyo systemka gumeystaha iyo midka xoriyadda – tabobar iyo is maamul hoose oo waqtigaas loo balan qaadey qeybaha SOUTHka and North SOMALIA ( not Jabuuti, NFD iyo Somalilgalbeed).
Waar ninkan inuusan gaashindhigga hoggaamin karin horaa loo ogaa ee ummadda ayuu wakhti ka dhumiyay.
Wasiir i dhaha ayuu warkiisu ahaa.
Taliyaha ciidanka garan maayo laakiin magaca uu sito ayaad moodda inuu ka tarjumayo.
Farmaajo iyo Khayre waa inay keenaan wasiir khibrad leh daacadna ah haba ahaado Robow. Waayo Ciidan qaran oo aanan qabiil ku dhisnayn nin mabda leh ayaa dhisi kara.
Farmaajo fulaynimada iska daa oo ciidan dhis. Haddii kale sanadaada ku dhamayso filim iyo jahawareer.
War reasonka aqoonsiga idinka hortaagan ileen maadnaan geynin UN goosashada ka hor.
adinkaa aqoonsiga iska hortaagan ee orda calalka marka hore geeya UN.
Ciise, miyaadan u jeedin m.waynaha m.waynayaasha ee aanu samaynay? miyaad ujeedin in xukunkii somaliya ay maanta isku hayaan 2 nin darod? away dadkii kale ee aad adigu kamidka ahayd? Kkkkkkkkkkkk
maxaanu geynaa ,albaabkaba nalaga furi waaye,,bal waxaad noogu sheekaynayso ka waran somaliya oo gumeysi haysto ayaa un ka qud badeeyey ,alla walaweyntu faan badanaa oo weliba talyaani haystey kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Ciisa, su’aal: ma ii sheegi kartaa waxa aan ku falaayo midnimada ay diidan yihiin kuwa report-ka noogu keena jigjiga ee aan kaga siiyey alla futadii itobiya igu celiya? Kkkkkkkkkkk lama kala xanaaqaan
Waar Waxaan idin weydiiyay Farmaajo ma Ali zero bay walaalo yihiin?
Igawala madaxweyne Zoo-maal soo maray oo ka liita inaanan weli arag.
Armaajo ii geeya maxaa ka danbeeyay?
kkkkkkkkk sxb waa madaxweyne fowdo ah cidina uma baahna ,wuuna ka shalaayi doonaa gaas,waxaan ku tusayaa daarood oo saaxadda siyaasadda ka baxay ,ileyn idinkii baa is jebiyaye,,daaroodna maanta wuu is nacay ,waxaana is nacsiiyey gaas iyo axmed madoobe
Ciise, mida kale sxb ninka cuqdadaysan ee meesha qasaaya waa khayre kkkk waxuu rabaa inuu dowladanada ku ciil baxo oo uu ku jabiyo hiraab kkkkkkkkk
Waar bal meel baan ku qortay sheeekadaadasee aan soo baadho , markaas baan kala ogaan inaad cawsle ii muusaysay iyo in kaleee, waligay ninka is waydiiyay ma ihi meeshaa uu calankan blue ga ahi ka yimide akkkkk wuxuunaan xasuusanahay in markii ugu horaysay laga tagaay Caasimada hargeysa ee Jamhuuriyada Barakaysan Ee somaliland.
shimbiri maalin bay dab qaaday ,maalintiina minal alle ayay gubtey ,calaashaan masjid bay gubtey,waxan uga socdaa maanta ina iley wuxu ku qanacsanyahay,waddankii somali oo dhan u dhimatay,inuu ku qanco maamul goboleed tigreega hoos taga ,oo dadkiisii jeel ogaadeen u dhisto sallaadiina ka mabnooco inay tukadaan ,xoolahana ku biraystaan MALES ma dhiman,,waar nin timirta shalay karsanayey oo buudi madhan laga kirayn jirey uun buu ahaa maantana buudhi madhan buu tigreegii ka kireeyey oo ku qanacsanyahay,,markaasaad nooga dhigaysaa inaad adigu tigreega nooga turjumayso,waar tigreega waynu u simanahay sxb waana gumeysi haddaad adigu jeceshahay anigu ma jecli ee danta ayaa i baday oo gobolo ayaan ku leeyahay,,balse kuma faano,,adigu iminka miyaad is caayeysaa mise waad is amaanaysaa kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Markaan ku dhaho malihid dood soomaaliyeed oo waxaad tahey QUTI tan ayaa muujineyso,
hadda waxaad laheyd anagaa qasney, markuu @ ciise ku xujeeyey ayaad hadana eedi la aadey Kheyre.
reer shaanshi iyo Barawaaniyiin ayaa sida laba goodlaha u doodilahaa haddii Afsomali lagu dood baran.
Qutigii dagaaladdii 77 ahaa
Ciise, sxb kadib 1991 maskaxdaada miyey kujirtay inuu darod maanta xukumi somaliya oo hadba sharciga uu sameeyo muqdisho lagaga dhaqmi? Soo fiiri mardhow aniga oo darabudhle ku haya oo leh: bustihii habacsanaa qaado kkkkkkk kaftan.com
Ciise, ina iley waxuu dooni ha ahaado ee maxaa naga galay mar hadii uu adiga kaa soo saaray futadii itobiya ee aad waligaa kujiri jirtay maantana aad isaga report-ka u gaynayso. Su’aashu waxaa weeye: ii sheeg waxa aan ku fali midnimada aad diiday adiga oo ANIGA report-ka iigu keeni jigjiga? Kkkkkkkkkkk lama kala xanaaqaan
why not??daarood miyaanay somali ahayn,,laakiin adigu ismaad lahayd waa lagu saamaxayaa ,oo dadka adoo kalaad moodeysey waa lagu saamaxay sxb ,in lagu saamaxay ogow laakiin ha firin bidhin dee ,shaadh kaa weyn ha gashan runtaan kuu sheegayaa ,,dadkani waa nasab cuqdad ma qabaan way saamaxaan dadka walalohood ah kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
sOmalilander miyaad taqaan inta calan ee soo martey Dhulka soomaaliya.
Masaakiinta Iidoor free civic education baad siisay
Imminka ayay sidooda indhaha xafuushta leh iska ridayaan oo odhanayaan warkaa ma jiro.
Hadda ka hor baan u sheegay calanka Hargaysa laga taagay ama laga keenay waa calanka buluugga ah.
Haddii aad tigrey neceb tahay adiga iyo aabahaa iyo awoowgaa midna waligii ma dilay nin tigrey ah ama maku riyooday xataa?
Dhul baan ku leeyahay iyo ina Iley baa Salaad dad u diidi bla bla waxaan jirin meesha hala imaan ee ka jawaab su’aasha. Ina Iley Salaad ma diidi karo oo isaga oo tukan ciidan TVyada waanu ka aragnaa ee wax kale keen.
Ciise, war aynu isu dambayno ee bal fiiri meesha aan marinaayo kii indhaha guduudan lahaa kkkk waxuu ku doodayaa: farmaajo ayaa noo dhaama gaas kkkkkkkkkkkk sxbyaal busy.com ee see you later
ma taqaantaa inta madaxweyne ee somali galbeed yeelatay ama kiilku?? waar ina iley daarood waa ka kow madax ka noqda,anagu markaanu hayney dee kumaanaan faani jirin ,bal inaad guntihiin baan idiin sheegayaaye,,ta kale sidee aniga ina iley futada amxaar iiga soo saari karaa isagiibaa futo amxaar ku aasane
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk waar bal waalidan eega kooraysan loooool
Kaneeecaa halkan ku dhufatay..
Waa mid Oromo ahaa oo 1977 kii hargeysa soo galay oo la odhon jiray IBRAAHIM ABBOO. dhuxule noqday baa maalin aanu maqaaxi xaafada ah ka shahaanay buu intuu nasoo ag fadhiistay nagu yidhi KANEECAA HALKAN KU DHUFATAY, wuxu u jeedaa kaneecaa I qaniintay.
Iminka ninkan Jugle ee inala doodayaa malaha waa IBRAAHIM ABBOO !!
Waxaad ii sheegta sababta aad u taageersantahay ninka C/kariim Qalbi dhagax Ogaadeen buu ahaa gaalo ugu dhiibay?
Miyaysan kamid ahayn xaqa qofka muslimka ahi kuleeyahay walaalkiisa muslimka in uusan gaal u dhiibin?
Adeer, nin Bari haddii aad Dubai ka tagto gaal kuugu dhiibi waa Ogaadeen darteed maxaad ugu xillan taageeradiisa somalilwaynta aad sheegto wa ayo?
Soomaali cali xun.
miyey is yeel yeelahayaan @ciise site waa xariif ee wuu la socdaa howlaha runtaa.
Mid waxaan arkey dhahaayo waxaan ku jirey raggii SNM, dee ilaa hadda waxaan la yaabanahey meel laga keeney 18 MAY. malaha waa maalintuu dhashey CIGAAL.
Maya sxb , ma aqaan inta calan ee soomaliya soo martay!!
SHAATI Qalbi-dhagax miyaad hadana soo xiratey,
shaley qosol badneydaa maantana oohin badanidaa — adeer haddaad FARMAAJO ka fileysan inuu Webiga hoos maro Garowe soo saaro waad qaldaneyd.
iska dhel wareega kursi maslaxo ayaa nagu fogaani.
waxaan maanta kuu balan qaadi inuu farmaajo dhameysan 4 sano, malag inuu dilo maahane. Yicibta iska guro
Waryaa Ciise Beenta daa kkkkkkkkkkkkkkkk
Kililka markii la aas aasayay ayuu Ogaadeen diiday in uu Itoobiya wax la wadaago deedna Habar dugaag kuwo looga yaqaano jigjiga ayaa madaxwayne noqday oo habar dugaagtii ayaa Ciid oo iidoor ah doortay lkn maxaa ka raacay in uu hadh cad Jijiga ka cararo kii saaray ee Cabdi majiidka hadhcad Addis Ababa lagu dhextoogto wixii intaas ka danbeeyay Ogaadeen baa haysta.
Cidkalana waxba kama aha Jijiga ee beenta daa.
Taariikh khaldan ayuu rabaa in uu dadka baro anaga oo nool k wrn!
Jugle aka Amxaar lover mole
Waar nin yahow isaga hadh jacaylka Axmaarada iyo ina Iley. Imminka gabbalkiisu wuu sii dhacayaa.
Dowlad dhab ah haddii ay jirto inta lagu soo qabto ayaa dameer lagu saari lahaa, deetana dumarka iyo caruurta ayaa ku kabayn lahaa ilaad ka laasato.
Qubahanaada aad qorto hal unbaad run ku sheegtay. Waa midda aad Ciise waydiisay oo ah, maxaad reportka ugu gaysaan ina iley oo Axmaaro wakiil ka ah.
Wallee taa jawaab iidoorka halka ka niic yidhaa jawaab uma hayaan.
cigaal muu joogin 18 may ,wuu xidhnaa ,cigaal diyaaraddii somali airline baanu u afduubnay ,waanu ku guuleysaney in dilkii isaga iyo ardadiiba ka bad baadino oo shuruud baanu kula galnay qaramada midoobey,,18 may,,waa maalintii naga luntay ee 26juun aanu dib usoo helnay,dee haddii wiil yar oo aad dhashay maalin kaa lumo ,maalinta aad soo hesho waad xusaysaa
Yes, dhulkoo dhan ma wada gaarin laakiin waxey surnaan jireen qeybo ka mid ah dhulka soomaaliya loogu yeero.
Flag of the Dervish State (1896–1920) (1903-1950)
Flag of British Somaliland (1903-1950)
Ka dib waxaa dhulka yimid calanka Bluegaa oo uu alifey Max’ed Cawaale Liibaan asagoo waxbarasho u joogo USA.
and flag of Italiyan somaliland (1861 -1946)
hadduu wiil yar oo aad dhashey kaa dhumo ma waxaad u bixin – magac kale markaad hesho.
war bal magaca wiilka in laga bedalo maxaa sababey –
Ciise maxaa kaa galay inta calan ee Soomaaliya?
Waar Cali zero oo miidhan ayaa xaarka iska mariyee
Ka fogoow qanmuun-kooda🤗🤗🤗
dawlada sariiir wadaaaag anaga xidida usiiibnay nin kale oo daarood aha ayan ku badalaynaaaaa farmaajo ceelbuur haka noqdo gudomiye
Dowlada aan Khayre iyo Farmaajo ka sugi maxay tahay?
Waa in soomaali ku dedaasho nimankaas sidii Kursiga looga tuurilahaa intaynan dadka soomaaliyeed kale dilin dalkana galinin god wayn oo uusan dib uga soo bixi doonin.
Wali garabki maah-maahda waan, soo gilgilayaaye
gubbiskii madow dhagaha way, ugu gammuuraane
waana geela bacowgiisi oo, loo gol leeyahaye
garruudkii hayin ahaa kolbuu, raran gubyoodaaye
gurgurshaa maroor loogu xidhey, caynka ganiciisa
kolba gibisha waa inuu ridoo, galangolcoobaaye
Ninkii gura dameer fuuli jirey, meydal garab weyn ah
goorada hadduu kaga dagoo, guudka kaga boodo
oo gacanta kor u baaciyoo, gaw ul kaga siiyo
oo muquuska dib u giijiyoo, gulubi-keydeeyo
gasariiriddaasuu xarraan, jara gariiraaye
Abdulaahi Macalin Dhoodaan (AUN)
Itaalkiini wuxuu noqday maro calala oo marna isku cuntaan mara ku xaartaan baanu leenahay?😃😃
Waar cantrabaqash-ka nagala taga gun guntu dhashay!
marka hore salaan sare sxb,,marka xigta anigu cidna ma weydiin imisa calan bay somaliya lahayd ,,somalilander baa dabshid igu qalday oo su’aasha meesha keenay qoraalada dib u raac sxb
Ciise, sxb inaad kililka kanoqoto m.wayne oo aad samayso jeel ogaden waxaa kuu suura galiyey dagaalkii ay caadh-dheertu kula jireen itobiya ee wakaas ee bal hada kanoqo m.wayne kililka 5aad kkkkkkk mida kale su’aal:
Diridhabo waxay ahayd magaalo ciise maantana oromo ayaa la wareegtay ee yaad ka sugaysaa inuu kuu xoreeyo, who? Kkkkkkkkkk
Ok Ciise Abti
Hurdo dheer gala oo doorashadiina qabsada nin aan aaminay ayaa na khayaamaye ilaa aan kursiga nka tuuro wax xagiina soo dhowri ma jiro ee ogaada.
Howshiina wata sida Jugle idiin sheegay midnimo aad diideen nin raba ma jire meeshaad doontaan ka dhaca (Sarcasm) kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Ali zubeer, war doqon yahow ogaden kor ubax oo garo sababta uu dabshid uneceb yahay itobiya kkkkkkkkkk sxbyaal busy.com ee see U later
wiilka magaca kama bedelin oo waa SOMALILAND magaciisu ,laakiin waxaan xusayaa maalintii uu ii dhashay iyo maalintii aan soo helay ,kadib markii uu iga lumay,,26juun buu ii dhashay waan xusayaa ,wuu iga lumay ,waxaan soo helay 18 may ,labada cashoba waa ii farxad waan xusayaa sxb .
ma ila socotaan ciyaalow kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Viva Jamhuuriyada barakaysan ee Somaliland.
Ogaadeen dowlada Farmaajo muxuu ka yidhi?
U sheeg Cali Zubeyr.
In badan baan dhalinta halkan wax ku qorta aan ka maqli jirray BAHAL waa DABSHID. ..caarkiinaa wasa , walee aniga layga ildheer. . Galabta oo saacadu tahay 4:08 waqooyiga America waxaan sicad u ogaaday warkii aan maqli jiray ee ahaa DABSHID & MR BAHAL is a same !!
Waa caynkaa Wiil ciideed
Walahay waxaan ahay CID da somaliland, in badan baan isku yuubay MR DABSHID & MR BAHAL, si fiican waxay usoo darseen in ay yahiin SAME ASS !!
WAA GUUL WEEYN OO CAAWAA AAN GAADHAAY!
ma hadda ayaad ogaatey qoraalada u fiirso sxb ,dabshid aka mr bahal
Anigiyo adigu isma baran maanta ama Farmaajo ka dib, waxaan is baraney waqtigii la doortey @ Guddoomiyaha ururka Zeko Sacuudi Mr Gaas (ex madaxweynaha DALKA PUNTLAND ee dalka somaaliya)
waxaad noo sheegtey aniga iyo Mr Cagey iyo Kaafiyo inaad tahey nin reer Mudug ah oo isu dhowdihiin Mr Gaas, abtina kuu yahiin Dhulos, waliba ka shaqeeyo urur mucaawino geeyo gobolka SOOL.
ka dib waa anagii ka dagaal galney -TALEX NET oo ay qorijireen raggii ina cali shire (kuxigeenkii faroole) sidaan u maleeyey.
Axmed madoobe markii la doortey ayaad hadana noo soo xiratey inaad tahey nin ogaadeen ah-
yes OGAADEEN waad ka dhigan kartaa xulufo, laakiin aniga ha iga sugin inaan kuula doodo sidii nin Ogaadeen ah.
ama jigjiga amaan, ama axmed cadde garmadoobe amaan, ama kismaayo maraq u raadso, ama gabayo dhoodaan soo qaado,
waxaad ii tahey sidaad ii sheegatey nin
Jariiban Yicib ka guro gobolka mudug.
** Beenlow xasuus badan noqo**
Somalilander, hahahaha, kaneecaa halkaan ku dhufatay kkkk 🙂
Jugle iska daa’ee, Yugaandheeskii iyo Ethpiankii wadanka soo galay, caruurtii eey dhaleen ayaa hadeer afsoomaliga bartay.
Kalahage, ayaa dhihi jirray, war hooy gaal la deeyn maayee, yaan lagugu dilin. Hadeer Jugle, oo Majeerteen ah, waxuu rabaa in uu Isaaqa ka xigsado Ethopianka. Laakiin, labadiina qolaba xariifiin ayaad tahiin, oo sida gaal iyo muslin ajnabiga wax looga kala badasho waad taqaaniin.
Waxaa dawaqsan waa agoontii kacaanka 🙂
Qoraalkaaga u danbeeya iigu celi oo far-waawayn bal iigu qor Dabshid iyo Mr Bahal hee?
Ciise buni axmed,
Waar sakhraan ku goor danbuu wax ogaadaaa abty kheeyr allah hakusiiyee.
Hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
Kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk Kkkkkkkkkkkkkkkkk Kkkkkkkkkkkkkkkk Kkkkkkkkkkkkkkkk Kkkkkkkkkkkkkkkkk
Waar Inaadeer kan Dabshid minuut kalshaale ku dhexnool yahay.
Maalin iyo Habeen waa ka dhex yusayaaye.🗣🗣🗣
Dabshid galabta wuxu cabay baan u malayn THE WISER kii
Dabshid, kkkkk, wiil ciideed, waad soo qabatay 🙂
Naag judge ah, judge Judy, ayaa dadka waxeey ku tiraahdaa hadii aad been sheegeeyso, xasuus fiican lahow 🙂
Hadde Wiil Ciideed tiiyaa heeysato, markii aad “file” kii aad u sameeysay soo saartay!
kkkkkkkkkkkkkkkkkkk waar odayga dabshid ama mr bahal ,daaya ,dee labadaa magac sow awelba laguma aqoon ,maxaa laguugu celiyaa
Sxb Anigu meeshan kama sheegay majeerteen iyo Ogaadeen midkaan ahay.
Qoraalkaas uu odeygaasi qorey waxaa ka run ah in aan sheegay in Dhulbahante reer Abti ii yahay inta kale oo dhan waa been.
ma waxaad ka aqoonsatey flagyada adal suldano oo reer Boorame ah.
Hadaad wax ka sheegto Axmed Cade
waa inaad noqotaa mariixaan ama shiishaal
hadaad wax ka sheegto somaliland waa inaad noqotaa Dhulos,
haddaad soo qaadato ADAL Sultana waa inaad noqotaa reer BOORAME.
Waar suldaan wax baa dhacay caawaa, ma nin hawiye ah baa cataa yaqanaa the ADAL STATE
CIRAAQ KEENTEE CAYDHA YAA’SIIN ?!
DABSHID. .A.KA.BAHAL. .
**CIRAAQ KEENTEE CAYDHA YAA SIIN**
Waa waagii ciraaq timmitta u keenaysay Jamhuuriyadii Somalia !!
Iigu celi waxaan u idhi waa hore ayaan ku idhi waa uun isla adigee mid uun igala dood deedna macal magac naag intii uu ii soo qaatay ayuu iga dhigey nin buufis qaba wuuna isaga mar xabeeyay. marka faraha ayaan isaga qaaday. Marka waxaas haku lugu’in ee adiguna imisa magac ayaad wadataa ?
Qabiilka aad sheegato xataa waa bug.
anigu waxaan ka yaabay dadkan somaliyeed ee hal hayska ka dhigta SOMALIYA HA NOOLAATO oo somalida is jecel ee noolaanaysaa xagay joogtaa,,waar anagu soamli noolaata ma rabno SOMALIYA HA DHACDO OO ADDUUNKA HALAGA WAAYO INSHAALLAAH ,bal taana ka warama saxiibayaal kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Waar highway gii baan saaranahee the second driver kii baa igu luloodayee waydinkaas , waxoogaa 3 saac oo danbaan jiidii Trailer keee,
CIRAAQ KEENTEE CAYDHA YAA SIIN ?!
ADEL STATE wallaahi wuu fashilmay ,hawiye adel garanaya waaba yaab.com kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
aniga iyo mr BaHal maba qarsano figradeena iyo hadalkeena ee maxaan iska bedalaa
tankale figradda waan isaga dhownahey
almiino waxaad dhahdaa waxaad tahey
@’ C/Raxmaan oo marna wadaad ayaad iska dhigtaa marna dabkaad shidaa sida DABSHID.
Double life means – killer and family man.
killer and gangs leader ma loogu yeero double life because waa isku mid. hadda wax weyn uma dhaxeeyaan figradaha dabshid iyo mr bahal.
** WALI WAXAAN KU JIRNAA CASHIRKII AQOON KORORSI**
Adal State Ethiopian History ayaa lagu dhigtaa iyaga ayaana sheegta Taariikhdaas iyo Dhulkaasba ee maxaa diidi in Hawiye Adal State barto?
waa caadi sxb cool down ,laakiin haddii lagu qabto waa la iska qaataa sxb bahasha ,dee muran waxba ma tarto ,balse well done intii aad ku ceeshtey laba magac ,,waar ma anagaan yaabin
iska daa hawiye caadi ah,bal soo weydii profeserada hawiye taariikh waqooyi ama somaliland kasoo jeeda waxay ku odhanayaan jabhad snm la yiraado ayaa ka jirtey,,wax ka horeeyey wallaahi waxba kama yaqaaniin,,haddaad weydiisona wuxuu ku odhanayaa EEBOW anigu balcad ma dhaafin kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
This is the half time whistle and its 1-1.
See you the next Half!!
Ciise Binu Ahmed
Wali professor Hawiye ah lama kulmin lkn in uu garan waayi ilama aha. Ciyaalka Xaafada iyo Pro kale saar Mudane.
Anigu maba diido waxa la igu sheego, qabiil iyo waxkasto
sidaan horey u sheegey hadey hooyadey dhahdo Dugsigii qaraanka waad u goysey soo maahan oo badad aadey, ma dhihijirin maya hooyo.
hadda islaanta waan isku dhibanahey – markey dhahdo waad guursan rabtaa soo maahan hadaad xamar aado, waan fiirayaa markaas ayaan qoslaa-
laakiin waxaan cashir aqoon kororsi u dhigahayey galabta mr sOmalilander iyo waxa loogu yeero double life.
Alla maxaa caawa leysku jabay
Waxaa iga su.aal ah maxaa keenay xiligaan kala guurka ah mexeey in ay madaxdu is casilaan?
Maxaa tiri dabshid iyo Mr bahal waa isku qof
Macquul maaha waayoo nin cadale kayimid iyo nin seylac kayimid in laysku qaldo qoraladooda
ma waxaad kula kulmi lahey Prof. Hawiye Jariiban.
wali lama kulmin kulahaa -geeljire waligaa miyaad tagtey Lecture debate ama aqoon is weydaarsi.
Waa midka Caliyaalo biyaha ka dhaamiyo ama Burco oo dhahey waligey lama kulmin Prof. Samatar(o)
igala wareeg eebow
waxaa kaa dambeeyey in caruurtii reer Bari ka soo dhago dhageeyeyn Qurac inuu is casilo Mr FARMAAJO si loo soo gaabiyo wareega KURSI MASLAXO.
Dabshid eboow salaan sare
Waxaasi majiraan farmaajo wuxuu ku fadhiyaa kursigii somaliya mexeey reer bari sheegayaan meesha ma shaxaadbaa la raadinayaa
Horaan u ogenyn reer bari in ay ilaahey ka baryayeen mudulood in uu kusoo laabta kursiga somaliya
Viva farmaajo no more mudulood iyo kursi masloxo
Ana waan yaabanaa Gadabuursi aka samaroon DAL MIDA da haya iyo hawiye ADAL STATE da haya!! BAL ADBA! !
PHYSCIC BAA YAABAY!
War Farmaajo in uu is casilay sheege?
10% een u ogolaanay in uu sii maamulo waa uun mudo yar ee meesha ha isaga kaco intii aanaan kursiga laad uga kicin. Jaajuus itoobiya in uu na hogaamiyo haddii aan rabno anagaa ku biiri lahayn Itoobiya.
Qalbi dhagax maanaan iloobin, Ogaadeen way ka gudbeen wakhtigii la iska gadan jiray ee ay dagaal axmaar sii wateen waa balan qof siyaasada ku qoloociya isna in ay ku qaloociyaan Kenya, Iyo Itoobiya iyo Kista ilaa iyo Yeed iyo Aato.
Sida Oromada ay cuna qabateyn u saareen waa in Farmaajana ay Cuno qabatayn u saaraan.
Qurba Joogaa Ogaadeen Mucaarad iyo Muxaafad waxaan ugu baaqayaa in ay ku mudaharaadaan Dowlada Farmaajo meeshii ay il ku saaraan adduunka dacaladiisa. Idinkaa ugu badan Soomaali.
It was the right time that could have catch the rats.. !
The medal of honor! 📆
Marnaba ma iloobi doono nimanka Qalbidhagax u dhiibay in uu Ogaadeen ahaa awgeed.
We will never let that person lives a joyful life.
Wiil cideed halkeed u had layaa aduu sxn, soomali kala tahtayee.. kolayba baho xabashi baad tahay, indhooweyd waxa laysku haystaa sidii loo noqon lahaa baha xabashi iyo baho IMARAAD ee adigu kee baad tahay?!
Qofku haduu bilaa mecno iska hadlo dhibkeeda ayey leedahay
Farmaajo 4 sano ayuu joogayaa ninkii doono hayska hadlo
Dhiibitaankii qalbi dhagax annagoo dhan ayey qarancan nagu aheyd laakiin taasi mecneheedu maaha in aan wadankeena u dumino
Anigu ninkii Qalbi dhagax dhiibay ayaan kasoo horjeeday. Inta Kursiga aanu ka Tuurina waan mucaaradsanaan. Dhinaca UBO ma taageersani sida Cali Zubeyr Danta gobolkayga iyo dadkagu waa First ruuxii intaas igu naca is my Enemy.
“ He we met Fire and Fury” D, J Trump intaas ayuu igala kulmi kkkkkkkkkkkkkk
Aan ku saxee Qalbi dhagax looma dhiibin waa Ogaadeen dartiisa ee hadalka yuusan kaa xumaan
Waxaa loo dhiibay caqli xumo Soomaaliyeed waana og yihiin forumkan inaan ka dhiidhidhinnay oo weliba meel xun gaadhsiinnay.
Midda aad tidhi maxaad u taageersan tahay Farmaajo?
Adeer anigu Farmaajo doorashadiisana waan ka soo horjeedsay sidaad adiguba ogayd, imminkana hab maamulkiisa waan ka soo horjeeda.
Laakiin waxaanan adiga iyo Soomaalida kaleba ka yeelayn nin madax u ah qaranka Soomaaliya fal uu sameeyay darteed inaan u maja xaabiyo.
Hala beddelo waa war sax ah, laakiin tallaabadii uu qaado oo sax ah hala diido buugga diinta iyo political governance kuma jirto.
Midda Soomaaliwayn xitaa haddii ayan jirin dee torch ayaan u shidayaa. Markaan golahan ku soo biirayay ma jirin hal hayskasi. Imminka wakaa tis qaaday oo rajadii ummadda soo noolayay.
Waxaan filayaa inaadan xagga fikirka iga dheerayne yeeyaan bahasha meel kale sii waydaarin
Fiiro gaar u yeelo, Axmar lover Jugle iyo Absame boy maahan Ogaadeen ama Absame. Juglaa ugu dhow oo marna wayteen u hadla marna ay soo korsadeen dhega dhegeeya.
Waa laba dhabayaco oo magaca Ogadeen ama Absame ku shaqaysta….Kala baro dadka
Saturday is gonna be a good day, we will be on a anfield stadium, Looserpool’s home.. we missing the a couple players like POGBA and FELLAINI, but we keep carry our responsibility and we will beat them to 4-0..#GGMU 👍😎
Anigu afar baad tidhiye hal maalin uma ogoli in uu sii joogo. Haddana isaga iyo xukuumadiisaba wixii damin ah een u dhigi karo waan u dhigi. Haddii aad Kursiga ku hayn karto nin aan Villa soomaaliya dhinac u dhaafi karin way inoo tahay.
Vengeance. Vendetta. Qabli dhagax ninkii gatay waa cadow .
Dhana waan ka waadaa ka warama , dhinacs kakena waan idin kala socdaa , waxadaa DARAWAL AH,
Czarkiisa wase miyaa lagu dhalay,.
Qalbi dhagax waa Ogaadeen ayaa loo dhiibay waana biyo kama dhibcaan. Farmaajo waa Barre Hiiraale ina adeerkiisii Itoobiya jaajuuska u ahaa ee Dilay Sheekh Xaji Qorexay waa ninkii Kista ku joogay Ogaadeenka ayaan ka ilaalin si aysan dekada ugala soo degin hub ee Itoobiyay hub nasii. Iyo Ogaadeen waa laaji. Adeer yaan lagu sirin inta aad magac soomaaliyeed u dhiban nimankaas yaysan ku dilin. Sida Oromo u kale jecleyn Soomaali qabiilkaad dooniba ahow oo ayaysan soomaali u kale Jeclayn Ogaadeen waxaad dooni ahow ONLF, Liyu Police , Raaskambooni kuli waa isugu mid iyaga ee wax faham.
Vendetta. Vendetta, Vengeance vengeance.
Hadii xanuunkaagu yahay qalbi dhagax waanu wada qabnaa xanuunkaas Ali zubeer wuu ogyahay wixii aan meshaan ka dhignay
Laakiin saxiboow anigu waxaan u maleynayaa sheekadaadu in ay tahay ku owr kacsasho
Waan isku raacsanahay in la soxo wixii qaldan laakiin sheedadaadu hadeey tahay hogaamiya koxeesyadii oo kale waano dagaal wakaas mudane farmaajo ninku tegi karo aan aragno
No more hiraab no more kab iyo jaan
Waagaad cusbayd eeed golaha kusoo biirtay, fresh baad ahayd dawlada cusub ee farmaajo, waliba waxaN umalayn inaad nagusoo biirtay maalintii farmaajo la doortay, bal ka waran Morale kaagaa, waxaan arkaa inuu si hooseee u dhasdhacayeee. .?!
Hayga na xanaaqin sxb !!
Waxaan kaa illaabay anigu ma ihi ONLF, mana taageersani Admiral Maxamed cumar inuu ONLF magaceeda biisho inta dhaanto u xidho laakiin waxaan marna qaadan karin gumeysiga Xabashida.
Sidaa oo kale Ina Iley waxaa uu iila mid yahay Axmad Madoobe, kaba qaad Xabashi oo la dagaallamada dadka aqoonta leh, iyo arzaaqda dadka.
Intaana qaamuuska ku darso
Anigu waxaan ahay tageere dowladeed maahi tageere shaqsi farmaajo waa madaxweynaha somaliya ilaa uu mid kale igu wareejiyo magaranaayo waxaan tageero oon qaran aheyn
Waxaa beryahaan nagu soo batay kuwa yaqaan sida loo tuugsado laakiin waxba tari mayaan
Qalbi dhagax ma waxaad leedahay aan isaga samirno oon Farmaajo taageero. Xaasha taas kuguma raacsani waa in aan kursiga ka kicinaa si aysan u dhicin mar labaad. Never again!
Waxaa tiri qalbi dhagax waxaa loo dhiibay igaaden nimo
Hadaan kuuraaco hadalkaaga ogaadeenku sow kuwii odayaashodu dhahayeen annagu waxaan nahay itoobiyaan?
Hadaad itoobiyaan tihiin sow qalbi dhagax itoobiya leydin kuguma dhiiban maxaad rabtiin?
Anigu qalbi dhagax waxaan u arkaayay in uu ahaa muwaadin somaliyeed oo katirsanaa milateregii somaliya qaladkaas ay gashay dowlada dhexe hadaadse adigu leedahay ogaadeen in uu yahay ayaa loo dhiibay
Adeer raali ohoow ogadeen ayagaa lasoo taagnaa waxaan nahay itoobiyaan weliba waanu ku qaldanay in aan u hiilino 77
Waar nin Cismaan Cawad la baxay oo ku dhex dhintay maqaaxi aan cidi ka shaahayn oo la yiraahdo MARQAN NEWS yaa u miciinna oo umadda u keenaa?! Warsangali buu sheegtaa, kun jeer baan idhi waar Somalilander baad tahee cidla umaad dhalane noogu kalaay ALLKALSHAALE.COM.
Stress kuu iskaga biin lahaa kalshaale, maxA yeelay way ka macmiil madan tahay MATQAAN NEWS.
Ninkaasi Ogadeennimo looma dhiibin ee wax hubso. Hana illaabana ma odhan ee iyadana qabso si uu hadalku u yaraado.
Suaashu waxaa weeye maxaan ka yeelnaa arrinkaasi inta uu Farmaajo joogo;
Qarankan u dumin mayno ee la soco.
Axmad Madoobe intaba waa ay dhiibeen Ogaadeen for whatever reason.
Axmad Madoobe muxuu uga hadli waayay arrinkan haddii uu qabiil yahay? Weli ma is waydiisay?
Lama tacaamulayno miyaynu odhanaynaa.
Tan waraabaha galgaduud ah ee Mareexaan iyo beesha la degta ee caydh warkeedu haddii uu dhammaaday iyo haddii kalaba qaran baa na deeqa ee hoos u dhigin. Kor u bax oo Soomaalinnimo hiigso. haddii lagu diido oo lagu beeleeyo Soomaalinnimo raadi. Haddii lagu dagaalo dee iska celi laakiin haku wareega caddaysan meel hoose oo hore loogu lugo’ay.
Nin war haayo ha kuu warramo
Bro Garqaad ama Cadaado ama Farxiyo iwm
For free education of cave dwellers……
Please noo sameeya survey kooban inta isku aragti ah ee golaha iyo mowduucyada hot button issue ee laysku maandhaafsan yahay
Si aan uga nasanno qabyaalladda iwm….
Hadalka adigaa dhameeyay mudane
Wiil cideed beryahaas golaha wuu ka maqnaa waad ogeyn dhiibitaankii qalbi dhagax sidaan uga dhiidhinay hadaan nahay somiweyn Ali zubeer ninyohoow wiil cideed wuxuu leeyahay hadal dhabayaco Suldaan ma naga hubtaa in uu yahay ogah oo sax ah
Mase dhaati ayuu no soo gashtay
Ali zubeer waad ogeyd reer bari wexeey dowlada ku tagereen in la dhiibo qalbi dhagax inteena kale isku aragti ayaan ka aheyn
Wiil cideed haduu rabo in uu hadda arinkii kadhigo qabiil Dee aanu aragno meshoow wax geeyo
Adiga oo kale Ogaadeen hiil kaama sugo waligaana maadan u hiilin ee taariikhda beenta ah ee kacaankii dhoob dhoobay meesha kale tag.
1977, waxaa dagaalka hogaaminayay jabhadii Soomaali galbeed waxaana la socday ciidamo soomaaliya ah waxaa dagaalka lagu dilay 80000 oo soomaali ah waxaa soomaali galbeed agaa 50000. Dhulka markii la qabsaday waxaa lagu la sudhi calankii soomaaliya ee blue ga ahaa halkii laga sudhi lahaa calankii Jabhada taasi waxay ka dhigtay dowlad dowlad kale ku duushay waxayna ciidaysay halgankii marka wax soo baro. Dadkaas yaa halkaas ku celiyay oo rajadoodii dilay.
Ninka nin iska jooga soo dhiibaya miyaa wax hiil ah bixin kara.
Ii bashaal sxb waxaagu waa muran jaceyl
Wexeey aheydba miyaad diidan tahay in laguu hiiliyay?
Qarankii ladhihi jiray somaliyw waxaa laga raacay dagaalkii 77 hadana waxaad go.aansatay in raggi shalay lagaa xureynaayay aad hoos seexetid miskiin
Aduunka waxaa ugu liito qof ogolaaday in uu gumeysi ku hoos nolaado
Cafis dhamaan wiil cideed hadaas noogu qabir
Wolverhamton baa argagaxday. .
The Klondike trapers…
Mr bahal baan ka maqli jiray #UGAADHSATO. .Hadeer waxaan daawanayaa Ugaadhsatada Barafka..The Klondike ..
Klondike wza meesha ugu Barafka badan dunida!
Go to u tube and watch the Klondike trapped, ass hole!
Muquumad baan u baahna hay caawaaa,AFGHAN KEBAB KII AAN DOONTO.
GOD BLESS SOMALILAND 🔝 💪
Sneak peek bitches!
Dhuntaa sida dhoocilaha, ragu markuu golaha ku jaalaabutaynayno ha dhuumanina, libaax yaduuu maalinta oo dhan bay hurdaan, laakiin marka gabalku dhaco cadkooday soo ritaan, waraabuhuna hamnabadooda ayuu usoo diyaar garoobaa.!
Waji buu gii aan soo booqdo ,
Did I shut it down here!? Looks like that, I did it!
Aniga ayaa kaaga marqaati in weligaa qabiilka tahay sheegin, Dhuloos Abti kuu yihiin waa sheegtay.
Adiga, Jugle iyo Dabshid ilaa maanta ma aqaan qabiilka tihiin!
Hadaan qiyaaso adiga iyo Jugle Kuumade Kablalax.
Dabshid, Sheekhaal ama Habargidir, wuxuu ka yimid saxarihii gobolada dhexe, waa kan saxaraha ku waashaye!!kkkkkkk😜
In Calanka Bluele Max’d Cawaale Libaan alifay ma qiratay! Ma ogeyn inaad nin Majerteen ah libin u ogoshahay!
Aan kuugu daree Cabdulaahi Ciise talaalkii laga shakiyey markii New York u socday, nin Cumar Maxamud ahaa ayaa lagu duray Cabdulaahi Cise u ekaa!
Madaxdii iyo Shaqaalihii Suldaan Kenadiid ayaa Koofur xoriyadda iyo talada dalka horboodayey, Cabdulahi Cise ka mid ahaa!
Xagee jireen Mudulood?
Sxb wax cusub nooma sheegin, waan ognahay in rabto in Ciidanka qaranka dhaqaalaha Somalia deyn iyo deeq hesho la siiyo la hubeeyo cid kalana hogaanka qaban, maalinta chance hesho ilaa Bossaso weerar ku ekeyso!
Ogow riyadaas waa dhaankii dabagaale oo aabahay iiga sheekayn jiray! Dhaan dabagaale dhaanshay ku oon bixi maysid.. Waa dhalanteed caruur ooman lagu maaweeliyo!😮
Ali Zubeer, iyo dhamaan asxaabta kale ee aqyaarta ah waan idin salaamay.
Survey ga, mowduucyada muhiimka u ah dadka, dalka, iyo diinteena Islaamka in aad wadaagno waa arrin wanaagsan oo aan soo dhaweeyn. Ma halkaan ayaan ku sameeynaa, mise survey monkey, waa web free ah, oo survey ga loogu talagay? Link inta laga soo qaada, ayaan halkaan ku post gareeyn karnaa.
Land of Punt, waa runtaa in aan jeclaan lahaa in ciidan xoogan oo Somaliya loo dhiso, aan kuug daree, ciidankaas kaliya Boosaaso uma dirri laheeyn in eey weeraraan, ee waxaan xataa u dirri lahaa, Cadaado iyo meel walba oo laga abaabulaya wax qatar ku ah dowladnimada iyo qaranimada dalka.
Laakiin, adiga ma fahmeeysid. Aan ku weeydiiyee, hadii reerkaaga amaba Boosaaso dad dagan eey mahbar noqdaan, oo eey Imaaaraadka amaba Ethopia u ogolaanayaan in eey wadanka Somaliya wiiqaan xornimadiisa, ma ogolaan laheeyd in ciidanka dowlada dhexe iyo shacabka Somaliyeed ka hortagaan, oo la dagaalamaan “traitors” kaas qaa’imiintaas dalka qiyaamaya? Mise?
Adal Empire taariikhdeeda aduunka ayaa lagu bartaa.Annagu Jabuuti Ayaan ku qaadanay markii aanu ahayn ka dhexe.Maaha wax afka laga shegsheego sida ta Ugaadhsatada ee ku jirta maanka dadka kkkkkkkkkkkkkkk
Waa taariikhda Somaliya ee dhabta ah marka laga reebo Ajuraan,Galedi,Abgaal iyo Biyomaal.
Adel Empire waxay maamushay sida uu u dhanyahay geeska Africa.
Amxaarka kabaha loo qaado ayay guumaysatay oo waa la qariyaa arintaasi inkasta oo Germeny shaaciyay arintaasi kuwa kale way iska indho tiraan.
Lebne Degel wuxuu dhintay kii oo Awoowgay Faras ku eryanaya gudbuu ka galay oo siduu u dhuumanayay ayuu gudkii ku dhintay.Kii isaga badalay ee Glewdelos,waxaa dilay Awoowgay Nuur Ibna Mujaahid Top Commender ahaa Ciidanka Adal Empire.
Ugaadhsato maaanta Amxaarka xayka haysa oo biyaha u sida – goblan talo aduunyooy maxay galaba meel joooooogtay.
Dadka isku fikirkahi waa qoraal.
Aniga iyo Dabshid fikir isku mid ah Ayaan ka qabnaa arimaha Somaliya.
Wiil Ciideed base on his previous numerous posts waa nin Ogadeenka ciideed ah, Maxamed Zubeer, reer Warfaa, reer dalal.
Awowgii sida uu hore u sheegay waxaa awog u ah Maxamed Cumar Dage, Waana ninka gabaygii guba ee doollo soo gebagabeeyay.
Awoowgii la gubka, qabyaaladda ka muuqata Ogadeenku malahan, waxaanan filayaa inuu reer hagarka ama Ali geriga abtiyaashii ka soo dhimbilo qaatay
Dooddiisu halkan inuu sax ku ahayn aragnay.
Wixii magaca Ogadeen wata ee saaxada soo gala sida labada khaai,niin Axmaar lovers,doqonka Jugle iyo Absame boy, Suldaanka iyo Abdiraxmaan baa la waydiinayaa.
Waxaan rabay intaad sheegtay qudha.
golahan wuxuu noqday mid aanan innovation lahayn oo lagu caajisayo. Waxaa ka muuqata lack of development, fadhiidnimo marka dhinac kastaba aga eego.
Maadaama dad culus iyo raaciyad badan ku xidhan yihiin waxaad damcay inaan wax ka beddelo ama spice up ku samayno golaha sida periodically survey oo aynu ku dooranayo current topics to serve better Somali larger community.
Sidaad u dhigtay waaba middaan sheegayay
Monkey survey haddaad soo dhejiso oo maalin ama weekba mowduuc aynu ku samayno survey waxaan filayaa inuu xamaasad gelin laa dadka
Halkaa aynu ka billowno
forumka waa u furan tahay waxay u dari karaan…..laakiin waxaan arkayay adiga, Garqaad iyo aniga iyo Farxiyo bal aynu hormuud ka noqonno…..
Maya in xal bad lagu rudo marabeen cidda amarkayga diida!
Waxaa tusaale noogu filan jabahadihii SNM iyo SSDF markay kacaankii dictator ahaa waxaa loogu jawaabay.
In Gaalkacyo Hargeysa la xasuuqo inta la yiri waa cadowga umadda Somaliyeed. Ma shacabka ayaa dambi galay.
Cadaado haddii aqligaaga lagu socon lahaa China ayaa mar hore Tiawan-Taibai gubi lahaa, 70 sano diiday inay China kusoo noqoto. Xirrir dhow lahaa USA iyo Japan oo China u aragtay cadowga kowaad, inkastoo hadda xamaasadii Communist vs Capitalist iska degtay!
Danyeer ayaa tahay aan ku cirba qaaday dhiigii Somali iska daadisay iyo meesha la joogo, welina booto iyo ciidanka qaran maaha in qabiilkayga daacada ah cid ahayn xukunto.
Yaad ka qoryo badan tahay, macal live savingayga u dirin, waxa shilin haysano hub ku gadin.
Xar Baraxley iisoo dhaaf
Dadka aad adigu u taqaan Mahbarka iyo traitors anigu halgamayaal in xornimo ayaga iyo caruurtooda ku noolaadaan oo ninka popular vote ku helay talada u dhiibtaan rabay, dictatornimo maya yiri, markii laga diiday oo la laayay qori qaatay!
You see this is the problem; Ones hero iyo ones fellon.
Xamaas waa terrorists reer galbeedka, Falastine waxay u yihiin xorimodoon.
markii dowlada mareykanka ay cadeymo keentay in alshabaabkii lagu laayay bariire ay ahaayeen alshabaab dowladan ay garowsatay ayna cadeeyeen in inta hogaamiye kooxeed cirfiid uu yahay hogaamiye qabiil dulmi doon aysan ciidamada mareykanka la shaqeyn karin is markaasina ay tahy in xilka laga qaado oo meesha lakeeno qof macquul ah la jaan qaadi kara xisbiga isbedel doon, no hogaamiye kooxeed